ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: April 2012
မူရင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူကိုဖော်ပြပြီးဂုဏ်မပြုနိုင်ပေမယ့် ထိုပုံများရိုက်ခဲ့ ပြီးကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ အင်တာနက်မှာ တင်ထားနိုင်တာကိုက နည်းတဲ့ စိတ်ထားမြင်
ဒါမှ လင်းဆွဲအချစ် တစ်ကယ်ဖြစ်တာ...
ခေတ်သစ်အဌာရဿ ၁၈ ရပ်ထဲ ထည့် ရမယ်ထင်တယ်...
ဆေးလိပ် ၁ လိပ်တည်းရှူရတာအားမရလို့ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ၄ လိပ်ရှူတဲ့ သူ...
သြော်....မခန့် ချက်ကတော့ ....
ယောကျာင်္း၊ မိန်းမ ဆက်ဆံရေး လမ်းပြမြေပုံ...
သင်ဘယ်အုပ်စုထဲ ပါသလည်း စဉ်းစားကြပါကုန်...
ချစ်သူငယ်ချင်း အတွက် လက်ဆောင်....
ခေတ်ကြီးကိုက....ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ဘူးဆိုယင် လေဆိပ်ကိုသာသွားလိုက်ပါ...
ဓါတ်မှန်အလကားရိုက်ပေးမယ်...ရင်သားစစ်ဆေးခြင်းကို မေတ္တာချည်းသက်သက်နဲ့ 
လုပ်ပေးမယ်...အကယ်၍များ အယ်လ်ကာအီဒါလို့ များယောင်ပြီးရွတ်မိယင်
အူလမ်းကြောင်းပါအခမဲ့ စစ်ပေးပါလိမ့် မယ်...
ဖိနပ်လည်းပြင်တယ်...ဓါတ်လည်းကု၊ နတ်လည်းကု (ဓါတ်စုံ၊နတ်စုံပေါ့ ...) မိသားစုစီမံကိန်း
တစ်အုပ်စုတည်းဆိုတော့ တစ်သံတည်းထွက်တော့ တာပေါ့ ...
အမျိူးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲ မကောင်းဆိုးဝါးသုံးကောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ 
ပုံပြင်ထဲကမိန်းကလေးလို ဆံနွယ်ရောင်းပြီး အိမ်ဝယ်နိုင်သူ... ရာပွန်ဇယ်လ် (ဂရင်းညီနောင်ပုံပြင်ဇတ်လမ်းများထဲက ဇတ်ကောင်မိန်းကလေး )ဟုချစ်စနိုးအမည်ပေးထား
တော့ တယ်... ဆံပင်ရှည်နဲ့ နာတာရှာ...
လို့ လည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်... အခုတော့ ဆံပင်ညှပ်လိုက်တာဟာ သမီးအတွက် ဘ၀အသစ်တစ်ခုစလိုက်သလိုပါပဲ... အယင်ကဆိုယင် ဆံ
ကူးနိုင်ပါပြီ..." လို့ သူမကပြောပြခဲ့ ပါတယ်.... အခုတော့ ဆံတို ဂုတ်ဝဲနဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ ပါးသွားပါပြီ...
နိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်... A girl nicknamed Rapunzel has cut her hair for the first time to give her family the fairytale home they’ve always dreamed of. Natasha Moraes de Andrade, 12, wept as her 5ft 2in locks were trimmed for the first time. But, just like the Brothers Grimm character famous for her long hair, her story has hadahappy ending. Natasha, who lives inashanty town in Rio de Janeiro, previously slept inatiny, windowless room.
But her family plan to use the £3000 she earned from
selling her thick, chestnut mane to buildanew house – witharoom for
her that will be fit foraprincess. The Brazilian girl used to spend four hoursaweek washing her hair and an hour-and-a-half brushing it every day. But now she has had it cut intoasimple bob, washing it only
takes five minutes. Natasha
said: “I cried at first when I was at the hairdresser’s to get it cut. I
was afraid I wouldn’t like it, and I was also scared I might not get the money I wanted for it. Getting it cut has given meanew life. I used to be afraid every time I went out that someone would grab my hair or try to cut it off, but now I can doalot of things which I couldn’t do before.
having cycling lessons and I’ve been able to go to the beach and swim without being afraid of getting my hair wet.” Her mother Catarina said: “I never put her under pressure to get it cut but she was likeaprisoner and wanted to do the things other girls her age do.” The family
are also finally able to switch on the fan in their house without fear that Natasha’s locks will get caught in it. Posted by
news: daily record.com
နှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် ၁၇၀ လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်...
ကားလမ်း ၁၆ လမ်းပါဝင်ပါတယ်...
အပ်ါထပ်တွင် ၈လမ်းပါပြီး...အောက်ထပ်တွင် ၈ လမ်းပါရှိပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကစားကွင်း...
လန်ဒန်မှ ၀င်ဘလေ ကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်... ကုန်ကျစားရိတ်ကတော့ 
ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံပါ...
လပ်စ်ဗေ့ ဂတ်စ် မှ အမ်ဂျီအမ် ဂရင်းဟိုတယ် ဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း ၆၂၇၆ ခန်းရှိပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး အဆောက်အဦး ...
ဒူဘိုင်းမှ ဘာ့ ခ်ျကာလီဖါ အဆောက်အဦးပါ....ယခင်ကတော့ ( မပြီးခင်ကတော့ ) ဘာ့ ခ်ျဒူဘိုင်း
လို့ အမည်ပေးထားတာပါ....အမြင့် ၉၀၀ မီတာ ရှိပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး လူစီးလေယာဉ်... အဲယားဘတ်စ် အေ ၃၈၀ ပါတဲ့ ...
ခရီးသည် ၅၅၅ ယောက်ဆန့် ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး မိုးလုံလေလုံရေကူးကန်....
ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အဲလ်ဘတ်ဒေသ၊ အက်ဒ်မွန်တန် အရပ်မှာရှိပြီး ၅ ဧက ကျယ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ကုန်တိုက်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒုံဂွမ်ဒေသမှ တောင်ပိုင်းတရုတ်ကုန်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်...
အထပ် ၆ ထပ်ရှိပြီး အကျယ်အ၀န်း ၈၉၂၀၀၀ စကွဲယားမီတာ ရှိပါတယ်...
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၊ ဘူခါရက်စ မြို့ မှ ပါလီမန်နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်...
အိပ်ခန်း ၅၀၀ ကျော်၊ မီးဖိုချောင် ၅၅ ခု၊ ဧည့် ခန်း ၁၂၀ ပါရှိပါတယ်....
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးတံတား ဒွန်ဟိုင်း....
၃၂.၅ ကီလိုမီတာ ရှည်ပါတယ်...
news: photos: general knowledge
This girl was spotted at the BMW stand at 2012 Beijing International Autoshow. 24 hours later she becameanew Chinese Internet sensation. Thousands of man are posting and sharing her photos, creating video tributes, etc.
သည်မိန်းမချောကလေးကတော့ ဘေဂျင်းမြို့ ၂၀၁၂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်တော်ကားပြပွဲတွင်
ပါရှိသည့် ဘီအမ်ဒဗလျူ ကားပြခန်းမှာ တွေ့ ခဲ့ ကြရတဲ့ မော်ဒယ်လေးဖြစ်ပါတယ်...
ထိုပုံများအင်တာနက်တွင်တက်လာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း နာမည်ကျော်ကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်..
သိကြတဲ့ အတိုင်း မိန်းကလေးချောချောလှလှ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံဆို မျှဝေချင်ကြတဲ့ အွန်လိုင်း
အမျိူးကောင်းသားများရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ အခုတော့ ကိုပီတာရဲ့ စာမျက်နှာထက်တောင်ရောက်ခဲ့ 
ရွှေပြည်ကြီးက အူဝဲထက်တော့ ပိုလှမယ်ထင်ပါတယ်...
ကားဝယ်ယင် သူ့ ကိုရော ရမှာလားဟင် !!!
ဟုတ်ကဲ့ ....ကျွဲကျောင်းလာကြတဲ့ လူကြီးမင်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အဝေးကြည့် အနီးကြည့် ....
သူလေးလည်း ....ဥစ္စာဓန ရှားပါးဟန်မတူ....
မခို့ တရို့ အပြုံးလည်း ပါသေးသပေါ့ ....
ဒီကားပြပွဲမှာ ဒီမော်ဒယ်ကို လူစိတ်ဝင်အစားဆုံးဆိုတာ သေချာပါပြီ....
ဘီအမ်ဒဗလျူရဲ့ တောင်းတင်းလှပတဲ့ မော်ဒယ်ဒီဇိုင်းပေါ့ ...
ပြပွဲကျင်းပတဲ့ သူများ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ကြပါပေတယ်...
၀င်တယ်၊ မ၀င်ဘူး !!! လောင်းမလားကိုယ့် လူ.... အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကန်ဒွါမတ္တရာပရာဒေ့ ဒေသမှ ဆရာဝန်များဟာ အရက်သမားအချင်းချင်းအလောင်းအစားပြိုင်
ဖြင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ ရောက်သွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်... သေရည်သေရက်ဆိုတာ ဘယ်နေရာကသောက်သောက်မူးတာပါပဲ...
အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ... Doctors in Khandwa, Madhya Pradesh, surgically removedaquarter bottle (180 ml) of liquor from the rectum ofaman who had allegedly inserted it to winawager of Rs 1000 (£12.20, $19.43) with fellow boozers. The
incident occurred on April 13 night when the person whose identity was not disclosed by the doctors inserted the entire bottle through his anus. Though he won the wager,
the man soon became unconscious. Next day when he regained consciousness, he tried to push it out but in vain following which he went toanursing home.
examining the patient, we decided to performasurgery which lasted for
nearly an hour and removed the bottle," Dr Gurdeep Singh Ubeja said. "But by that time it has damaged the anus area as well as urinary bladder," he said.
ဆိုင်ကယ်ရပ်မှုကြောင့် အချင်းများ...ညှစ်အားပိုလို့ သေရသူ....
လွန် ခဲ့ သည့် ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ က တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟိုင်နန်ပြည်နယ်၊ ဟိုက်ကိုမြို့ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ယာဉ်
ရပ်နားရန်နေရာအငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူ အမျိူးသမီးတစ်ဦးမှ အမျိူးသားတစ်ဦး
ဝှေးစေ့ အား ညှစ်ပစ်ခဲ့ သဖြင့် ထိုအမျိူးသားသေဆုံးခဲ့ ရပါတယ်...
သိပ်ညှစ်ကာ အကြင်နာပိုတော့ ... သည်မောင်မှာ ခန္ဓာစဲရတယ်...ဆွေးရတက်ပွား...
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိအဆိုပါအမျိူးသမီးဟာ ဟိုက်ကိုမြို့ မေလန်အရပ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းသို့ သူမ၏
ကလေးအား ကြိုဆိုခေါ်ဆောင်ရန် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက်ခဲ့ ပါတယ်...
ကျောင်းအနီးရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ တွင်သူမဆိုင်ကယ်အားရပ်တန့် ရန်ကြိုးစားစဉ် အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ
ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိူးသားမှ မရပ်ရန်ကန့် ကွက်ခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းနောက် နှစ်ဦးသားစကားများအချင်းများကြရာမှ ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်ကာ ရိုက်နှက်ထိုးသတ်ကြသည်
ဒီလိုပုံ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်သူကို အရေးပေါ်အသက်ကယ်ကုထုံးနဲ့ လည်း
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသည့် အမျိူးသမီးမှ သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူတို့ အားလာရောက်ကူညီ
ပါရန်ဖုံးဆက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ သဖြင့် ရန်ပွဲမှာ ပိုမိုပြင်းထန်ခဲ့ ပါတယ်... ရန်ပွဲအတွင်းသက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ရှိ အမျိူးသမီးမှ အမျိူးသား၏ အဓိကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအား မိမိရရဖမ်း
မိဆုပ်ကာ ထိုသူမြေပေါ်သို့ သတိလစ်လဲကျသွားသည်အထိ ညှစ်ထားလိုက်ခဲ့ ပါတယ်...
ဒါဏ်ရာရအမျိူးသားအားဆးရုံသို့ ချက်ချင်းပို့ ဆောင်လိုက်သော်လည်း ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်
မည်သို့ ပင်ကြိုးစားကုသခဲ့ ကြသော်လည်း သေဆုံးသွားခဲ့ ရပါတယ်.... ဆရာတို့ ...
နောင်ဘယ်တော့ မှများ အသက် ၂၀ ကျော်၊ ၄၀ ကျော်တွေနဲ့ ရန်ဖက်မဖြစ်ပါနဲ့ ဗျာ...
On April 19,afemale scooter rider killedaman by squeezing his testicles duringaparking dispute, in Haikou City, Hainan Province. The
41-year-old woman rode on her scooter to an elementary school in Meilan
District, Haikou City to pick up her child. When she wanted to pack her
scooter in front ofashop, she was rejected by the shop owner,a42-year-old male. The two parties soon fell intoaquarrel, and thenaphysical confrontation. The furious woman called her husband and brother to come help her, which resulted inamore violent fist fight.
ဂိမ်းစက်မ၀ယ်ပေးလို့ အသက် ၄ နှစ်သားမှ ဖခင်ဖြစ်သူအားပစ်သတ်.... အထိန်းကုလားနဲ့ ဂိမ်းကစားမယ့် ဟာကို တားဆီးတဲ့ ဖေဖေ...
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ ဖခင်ဖြစ်သူတစ်ဦးဟာ ၎င်း၏အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ရှိ သားငယ်ဖြစ်သူမှ ဦးခေါင်းအားသေ
နတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ ရပါတယ်...
ဖခင်ဖြစ်သူက ၎င်းအား Play Staion ဂိမ်းကစားစက် ၀ယ်ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့ မှုကြောင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်
ခဲ့ ခြင်းဖြစ်တယ်လုို့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်...
ဆော်ဒီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂျီဇန်ဒေသရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ အဆိုအရ အသက် ၄ နှစ် နှင့်၇ လအရွယ်ရှိကလေးငယ်
ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်အားယူကာ ဦးခေါင်းကိုပစ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့Asharq နေ့ စဉ်သတင်း
အစကတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ ပစ်မလို့ ပါပဲ...
ဂိမ်းမ၀ယ်ပေးတော့ တစ်ကယ့် သေနတ်နဲ့ ပဲပစ်လိုက်ရတယ်...
ကလေးငယ်က ဖခင်ဖြစ်သူအား ပလေးစတေရှင်းဂိမ်းစက်ဝယ်ပေးဖို့ ပူဆာခဲ့ ကြောင်း၊ ၎င်းအလိုရှိသည့် က
စားစရာမပါရှိပဲ ဖခင်ဖြစ်သူအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ ပြီးနောက် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်းဖြင့် သ
အ၀တ်အစားလဲနေစဉ် သေနတ်အား အောက်သို့ ချထားခိုက် ကလေးငယ်က ကောက်ယူက အနီးကပ်ပစ်
သို့ သော်လည်း တစ်ခြားဆော်ဒီသတင်းစာများ၏အဆိုအရမူ အသက် ၄၀အတွင်းရှိဖခင်ဖြစ်သူဟာ၎င်း၏ယူ
ကလေး သေနတ်အားယူကာဆော့ ကစားနေပြီး မောင်းခလုတ်အားဖြုတ်လိုက်သည်အထိ သတိမထားမိခဲ့ 
" ကလေးက သေနတ်မောင်းကိုဆွဲညှစ်လိုက်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဦးခေါင်းကိုတစ်ချက်တည်းထိမှန်ကာ ပွဲချင်း
ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်..." ဟု ဆာ့ ဘ် အာရပ်ဘာသာသတင်းစာက ဖေါ်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးငယ်ဟာ ဆော်ဒီအာရေဘီးယားနိုင်ငံတွင်တော့ အသက်အငယ်ဆုံး လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်
ဟု ဆာဘ် သတင်းစာကဆိုပါတယ်...
သူတို့ ပူဆာယင်မြန်မြန်သာဝယ်ပေးလိုက်ဗျာ...ခေါင်းနဲ့ ကိုယ်အိုးစားမကွဲချင်ယင်... A Saudi man was killed after his four-year-old son shot him in the head at their house in the Gulf Kingdom.
The Asharq daily, citing police in the southern Jizan area, said the child, aged four years and seven months, grabbed his father's pistol and
According to the newspaper, the child had asked his father to buy him
a PlayStation and the shooting took place after the man returned home without the desired object.
However, according to other Saudi papers, the father, in his 40s, had
not noticed that his child had reached his gun and was playing with it before putting his little finger on the trigger.
news: emirates 247.com
photo graphic : knowledge
-dous နဲ့ ဆုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ...
ရေတွင်းတွင် ရေခပ်နေစဉ် လှံဖြင့် ထိုးသတ်မှု ဖြစ်ပွား